छतमै लटरम्म ! | Bishow Nath Kharel
छतमै लटरम्म !
Posted on May 8, 2014 by bishownath
ललितपुर, वैशाख २० – हिजोआज सहर/बजारमा खाली जग्गा देख्न पाइँदैन । भएका पनि प्लटिङ गरेर बाँझै छन् । जाँगर हुनेहरूले छतमै मनग्ये तरकारी र फलफूल उब्जनी गर्न थालेका छन् ।
ललितपुर ठैब-५ का सुरेन्द्रकुमार आचार्यको छत गाउँघरको तरकारी बारीभन्दा फरक छैन । उनको छतमा मौसमी र बेमौसमी तरकारी तथा फलफूल छन् । गाडीको टायरमा स्याउ फल्दै छ । छेउमै रहेको अर्को ड्रममा कागती । माछा राख्ने कार्टुनमा मकै, काँक्रो, फर्सी, काउली छन् । फूल राख्ने गमलामा खोर्सानी, टमाटर र भान्टा लटरम्म फलेका छन् ।
छतमा चारैतिर माटो राख्न मिल्ने गरी पख्र्ााल लगाइएको छ । त्यहाँ सिमी, बोडी र लौकालाई चाहिने थाङ्ग्रो हालिएको छ । लगाएको चार वर्षमा यो पटक स्याउ फलेको हो । कागती लगाएको ९ वर्ष भयो ।
३ पटक फलिसक्यो । ‘फोहोर नफालौं, नबालांै, नगाडौं पुनः प्रयोग गरौं’ फोहोरको पुनःप्रयोग गरी छतको तरकारी र फलफूलमा मल हाल्ने गरौं आचार्यले भने । ११ वर्षदेखि घरमा चाहिने तरकारी बजारबाट नकिनेको उनले बताए । ‘छतमा उत्पादन गरेको तरकारीले घर चलाएको छु । फलफूल फल्दै छन्, बेच्न लैजान दिन्नँ, परिवारलाई खान पुग्छ,’ उनले भने ।
यस्तै ठैब-६ की सुनीता अधिकारीले पनि घरको कौसीमा आफ्नो परिवारलाई पुग्ने सबै प्रकारका तरकारी फलाएकी छन् । काउली, सिमी, टमाटर, बोडी, लसुन, प्याज्ा, खोर्सानी, धनियाँ, मुला, भान्टालगायतको मौसमी तरकारी छतमा छन् । ३ वर्ष भयो अधिकारीले तरकारी लगाउन थालेको । बजारमा विषादी प्रयोग गरिएका तरकारी खानाले विभिन्न रोग लाग्ने हुनाले जग्ग्ाा नभए पनि छतमै उत्पादन गरेको अधिकारीले बताइन् । ‘बेच्ने गरी तरकारी लगाएकी छैन, परिवारलाई खान पुग्ने लगाएकी छु,’ उनले भनिन् ।
अधिकारी जस्तै ठैब-२ की लक्ष्मी महर्जनले पनि कौसीमा तरकारी लगाएकी छन् । बजारमा तरकारीको मूल्य बढी भएकाले पैसा पुर्‍याउनै नसिने हुनाले कौसीमा तरकारी लगाएको महर्जनले बताइन् । कौसीमा तरकारी लगाउन थालेपछि दैनिक सय रुपैयाँ तरकारीका लागि लाग्ने पैसा वचत गरेको उनले सुनाइन् । कौसीको तरकारीले परिवारलाई पुगेको छ, पैसा पनि जोगिएको छ,’ उनले भनिन् ।
प्रकाशित मिति: २०७१ वैशाख २० ०८:४४
– See more at: http://www.ekantipur.com/np/2071/1/20/full-story/388569.html#sthash.d8Ky3Efv.dpuf